I-Social Media Universe: Yiziphi Izingxenyekazi Ezinkulu Kakhulu Zomphakathi ngo-2020? | Martech Zone
Usayizi unendaba ukuthi singathanda ukukuvuma noma cha. Yize ngingeyena umlandeli omkhulu wamaningi ala manethiwekhi, njengoba ngibheka ukuxhumana kwami ​​- amapulatifomu amakhulu kakhulu kukhona lapho engichitha khona isikhathi sami esiningi. Ukuthandwa kubangela ukubamba iqhaza, futhi lapho ngifuna ukufinyelela inethiwekhi yami yokuxhumana nabantu kungamapulatifomu athandwayo lapho ngingawafinyelela khona.
Qaphela ukuthi ngishilo ekhona.
Angisoze ngeluleka iklayenti noma umuntu ukuthi angazinaki izinkundla zokuxhumana ezincane kakhulu noma ezintsha. Imvamisa, inethiwekhi encane ingakunika ithuba lokunyuka ezinhlwini futhi wakhe okulandelayo ngokushesha okukhulu. Amanethiwekhi amancane awanakho ukuncintisana okungako! Ingozi, yiqiniso, ukuthi inethiwekhi ingahluleka ekugcineni - kepha noma kunjalo ungadudula okulandelayo kwakho kwenye inethiwekhi noma ubashayele ukubhalisa nge-imeyili.
Futhi, angisoze ngaluleka iklayenti noma umuntu ukuthi angazinaki izinkundla zokuxhumana zeniche. I-LinkedIn, ngokwesibonelo, iseyikhiqiza ehamba phambili yemininingwane nemininingwane kimi selokhu ngithengisa emabhizinisini. Njengamapulatifomu afana ne-Facebook adicilela phansi okuqukethwe kwebhizinisi eliphilayo futhi aqhubekele kufayela le- khokha ukuze udlale Indlela yokuthola imali, i-LinkedIn inyusa amandla ayo wokuxhumana nokuqukethwe.
Imithombo yezokuxhumana isingene cishe kuzo zonke izici zempilo yesimanje. Umkhathi omkhulu wezokuxhumana ngokuhlangene manje ubambile 3.8 billion abasebenzisi, abamele cishe 50% yenani labantu emhlabeni jikelele. Nge- izigidigidi ezengeziwe Abasebenzisi be-inthanethi abalindeleke ukuthi bafike online eminyakeni ezayo, kungenzeka ukuthi indawo yezokuxhumana ikhule ngokwengeziwe.
UNick Routley, Ongxiwankulu Ababonakalayo
Lokho kusho, kuhle njalo ukugcina amathebhu ngokwenzekayo kufayela le- ezokuxhum yonke! Le infographic evela ku-Visual Capitalist, I-Social Media Universe 202, inikeza umbono omuhle kuzinkundla zokuxhumana ezihola phambili emhlabeni. Futhi nakhu:
Isibalo Inethiwekhi Yokuxhumana Ama-MAU Ezigidini Izwe azalelwe kulo
#12 yocingo 400 Russia
Kubalulekile futhi ukuthi i-a umsebenzisi osebenzayo njalo ngenyanga akuyena umuntu ngamunye. Amaningi ala mapulatifomu anama-akhawunti asebenzayo acindezela okuqukethwe kuwo ngokuhlelekile. Ngokubona kwami, lokhu kuphazamise impela ikhwalithi yokusebenzisana kwamanye amapulatifomu. I-Twitter, i-IMO, ithinteke kabi kakhulu futhi ekugcineni iyabona ukuthi ibimbi kangakanani futhi isusa ama-akhawunti e-bot ngokuqhubekayo. Futhi, i-Facebook isiqalile ukukhipha amakhasi anempikiswano epulatifomu yayo ukuthuthukisa ikhwalithi yezingxoxo kanye nokunciphisa amathuba okuthi izindaba ezingamanga zabiwe futhi zenyuswe.
Tags: 2020Baidubaidu tiebadouyinFacebookfacebook messengerinstagramumugqaLinkedInizwiisithunywaabasebenzisi benyanga abasebenzayoPinterestqqRedditSnapchatsocial mediaamapulatifomu ezokuxhumanaezokuxhum yonkeabasebenzisi bezokuxhumanatelegramithibaTwittervibervkwechatweibowhatsappyoutubeyyIndawo